Sida loo gooyo GIF: Cashar fudud oo ku saabsan sida loo gooyo GIF | Hal-abuurka Online
Inta badan naqshadeeyayaasha ku shaqeeya qaababka GIF, Waxay u adeegsadaan kheyraad ahaan warbaahinta xayeysiinta ee internetka. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadleynaa waxa uu noqon karo bogga internetka ama banner.
Waxa yar oo aan ka warqabin ayaa ah in gooyntu ay sidoo kale qayb ka tahay tafatirka qaababkan. Maqaalkan, kaliya kuma ogeysiineyno ku saabsan kordhinta iyo qaabka GIF, laakiin sidoo kale, Waxaan ku tusineynaa dhowr tillaabo oo fudud, sida loo gooyo GIF.
Si kastaba ha ahaatee, waxaanu kugu martiqaadaynaa inaad nala joogto ilaa dhamaadka oo aad ogaato dhinacyo xiiso leh qaabkan.
1 Kordhinta GIF
2 Siyaabo kala duwan oo loo gooyo GIF
2.1 On Mac iyo Windows
2.1.1 Talaabada 1: Ku rakib barnaamijka oo soo deji GIF
2.1.2 Talaabada 2: Dalag GIF oo badbaadi
2.2 Gifs dhexdeeda
Kuwa idinka mid ah oo aan aqoon u lahayn qaabka GIF, waxaa lagu qeexay qaab qaabaysan oo sidoo kale lagu xiriirin karo kuwa kale sida PDF, JPG ama si fudud TIFF.
Magaceedu wuxuu ka yimid «Qaabka Isweydaarsiga Sawirrada. Waxa sifada qaabkani tahay in ay ka timi khariidad ku habboon oo ku habboon sawirada ilaa 8 bits per pixel. Faylka fidinta .gif waxaa inta badan loo istcimaalaa kheyraadka qaabka faylka ee shabakada iyo sida sprites ee codsiyada software.
Tayada ugu gaarka ah ee ay leedahay Habka faylka GIF waa in ay isticmaasho habka isku-buufinta ee aan khasaaraha lahayn. Natiijo ahaan, wax saameyn ah kuma yeelan tayada sawirka. Marka la codeeyo codsiyada ciyaarta, qaabka GIF wuxuu ku yimaadaa adeegsi weyn sida si sahlan loo kaydiyo xogta sprite midab-hoose.
Waxaan ka heli karnaa GIF-yada shabakadaha bulshada intooda badan waxayna leeyihiin sifada aasaasiga ah ee gudbinta macluumaadka si dhakhso ah, iyo sidoo kale shucuur. Sifooyinka kale ee GIF ay bixiyaan waxaa ka mid ah:
Waxay leedahay qaab fudud, kaas oo u oggolaanaya in lagu ciyaaro qalab kasta.
Waxay leeyihiin awood sare oo ay ku soo jiitaan dareenka oo ay u oggolaadaan in si degdeg ah oo aan dadaal lahayn loo fahmo waxa ay isku dayayaan inay gudbiyaan.
Waxay abuuraan sumcad iyo hawlgelin. Waa hab si degdeg ah loola xiriiriyo fikradda oo lagu gaaro dadka la beegsanayo.
Waa qaab awood weyn u leh fayraska.
Siyaabo kala duwan oo loo gooyo GIF
Waxaa jira siyaabo kala duwan ama habab aad awood ugu yeelan karto goosashada GIF. Waxaan sharaxnaa sida loo sameeyo:
On Mac iyo Windows
Beddelka Fiidiyowga caanka ah ee Vidmore waa barnaamij desktop heersare ah oo la socda hawlo awood leh oo loogu talagalay tafatirka GIF, beddelka waxyaabaha warbaahinta badan iyo kor u qaadista fiidiyowyada. Waxay awood u leedahay goosashada GIF halkaasoo aad u qaybin karto GIF qaybo badan. Sidan, waxaad ku garan kartaa qaybta aad rabto inaad ka baxdo GIF.
Haddii waxa aad doorbidayso ama aad xiisaynayso ay tahay qurxinta ama tafatirka GIF, waxaad ku samayn kartaa adiga oo isticmaalaya shaqada Isbedel ee qalabka. Waa kan sida loo sameeyo
Talaabada 1: Ku rakib barnaamijka oo soo deji GIF
Xigasho: PoPro Downloads
Kahor intaadan bilaabin. waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la rakibo barnaamijka, kaas oo aan ku shaqeyn doonno. Waa in aad marka hore soo dejisa oo ku rakibtaa kombayutarkaga Marka aad rakibto oo aad diyaariso, socodsii barnaamijka oo tag tab ka Caja de herramientas oo xulo Abuuraha GIF.
Kadib bilawga software-ka, soo deji GIF aad rabto inaad gooyso ama qaybiso. Oo marka aad haysato, guji fiidiyowga GIF y go'aanso GIF aad u baahan tahay inaad ka shaqeyso.
Talaabada 2: Dalag GIF oo badbaadi
Si loo gooyo GIF, dhagsii badhanka Jar si loo gooyo GIF. Daaqaddan, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad ku darto qaybo oo aad qeexdo muddada waqti ka duwan. Marka xigta, go'aanso qaabka aad u baahan tahay inaad gooyso oo guji Qashinka ee muraayada horudhaca.
Marka aan dhammeyno, riix batoonka Badbaadi si loo dabaqo isbeddelka aanu samaynay. Taas ka dib, waxaad astaysto kartaa qaabka wax soo saarka ama awood animation loop. Hadda deji meesha uu galka u socdo ka dibna taabo Abuur GIF oo badbaadi natiijada kama dambaysta ah.
GIFS.com waa codsi online ah oo kuu ogolaanaya inaad GIF-yada si toos ah uga abuurto bogga shabakadda. Waxaad ka faa'iideysan kartaa jiiditaankeeda iyo hoos u dhigista interface adigoo ku dhejinaya faylkaaga qalabka. Halkaa waxa kale oo aad ka heli doontaa goobo kala duwan oo GIF ah oo aad geli karto sida ku darista qoraal-hoosaadyo, sawirro, jarid fiidyaha, iyo qaar kaloo badan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad jarto cabbirka GIF markaad isticmaalayso barnaamijkan. Qalabka kor ku xusan waa codsi ku habboon baahidan gaarka ah. Si aad u ogaato sida ay u shaqeyso, waxaanu ku tusinaynaa hage tixraaceed gaaban.
Talaabada 1. Tag website-ka rasmiga ah ee qalabka, ka dibna jiid iyo hoos GIF ka folder maxaliga ah in interface ee codsigan online.
Talaabada 2. Qaybta bidixda, waxaad heli kartaa qalab kala duwan oo lagu habeynayo, intaa waxaa dheer, waxaad ku dari kartaa qoraallo, dhejisyo, hagaajiso kala dheereynta, iwm.
Tallaabada 3. Si aad u bilowdo hawsha, waxaad jiidi kartaa bilawga iyo dhamaadka dhibcaha xakamaynta jarista. Dabadeed ku dhufo Create GIF dhanka midig ee sare ee interface-ka. Habkani sidoo kale waa mid lagu dabaqi karo haddii aad rabto inaad muuqaal u jarto GIF.
Tallaabada 4. Marka xigta, ku dar macluumaadka lagama maarmaanka u ah GIF. Waxaad si fudud u kaydin kartaa wax soo saarka adiga oo gujinaya Download ama la wadaag xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada.
Iyadoo EZGIF, kaliya ma gooyn kartid GIF-yada, laakiin sidoo kale ma beddeli kartid GIF-yada sidaad jeceshahay. Markaa, haddii yoolkaaga ugu weyn uu yahay in la yareeyo cabbirka GIF-gaaga, ha sii eegin. Sidoo kale, qalabku wuxuu ka shaqeeyaa shabakad kasta oo browser ah. Xitaa isticmaalayaasha aaladaha moobiilka, qalabkani wuxuu noqon karaa mid waxtar weyn u leh. Waxaad isticmaali kartaa oo aad baran kartaa sida loo gooyo GIF on iPhone iyo Android sida caadiga ah ee aad PC. Waxaan kuu daynaa talaabooyin aad raacdo:
Tallaabada 1. Fur browserka aad inta badan isticmaasho oo booqo bogga rasmiga ah ee qalabka.
Tallaabada 2. Marka xigta, guji ikhtiyaarka Jar laga bilaabo menu-ka oo waxay u boodi doontaa guddi kale oo aad ku shuban karto GIF. Guji Xullo faylka oo geli faylka GIF
Tallaabada 3. Ka dib markii loading, qalab ku siin doonaa macluumaad ku saabsan GIF ah, gaar ahaan jir ah iyo muddada guud ee GIF ah. Dooro haddii aad rabto in aad ku gooyso lambarka jir ama wakhti. Ka fursadaha goynta guddi, dhagsii liiska hoos u dhaca oo dooro si waafaqsan.
Talaabada 4. Hadda cadee bilawga iyo dhibcaha dhamaadka si waafaqsan habka aad dooratay. Tusaale ahaan, qiyaasi in aan dooranay in aan ku beerno qaab-dhismeed oo aan go'aansanay in la gooyo 10-16. Dhanka kale, waxaad isticmaali kartaa qalab isku mid ah si aad u muujiso xirfadahaaga jaritaanka baadiyaha GIF oo gooyo qaybo aan loo baahnayn.
Tallaabada 5. Guji badhanka Muddada ee gooynta ka dibna hoos u rog bogga oo waxaad arki doontaa muuqaalka GIF. Si aad u soo dejiso wax soo saarka, si fudud guji Keydi badhanka
Haddii aad raadinayso qalab aad u horumarsan oo aad ku goosan karto GIF halkii aad ka isticmaali lahayd hababka caadiga ah, Adobe Photoshop waxa laga yaabaa inay fuliso rabitaannadaada ugu fiican. Waa qalab caan ku ah awoodaha tafatirka sawirka. Marka laga reebo taas, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Photoshop si aad u jarto ama u jarto GIF-yada dhib la'aan. Haddii aad sidoo kale rabto inaad sawirto GIFs, tani waa qalab ku habboon baahidaas. Si aad u isticmaasho, waxaanu kaa tagnay hab-socod-tallaabo ah si aanu kuu hago.
Tallaabada 1. Haddii aad hore ugu rakibtay Photoshop kombuyutarkaaga, socodsii oo ku shub GIF-ka.
Tallaabada 2. Si aad GIF ugu shubto qalabka, u gudub Faylka> Fur hadhow oo ka dooro GIF ka dariiqaaga adag.
Tallaabada 3. Ka dib markii loading, waa in aad aragto dhammaan frames ee daaqadda Timeline. Halkan, ka dooro fiimyada aad rabto inaad ka saarto oo guji qashinka ku jira liiska ka hooseeya fareemada.
Tallaabada 4. Kahor intaadan badbaadin shaqadaada, waxaad dib u eegi kartaa GIF oo dhan adigoo gujinaya icon Tap. Hadda u gudub Faylka> Dhoofinta> Badbaadinta Shabakadda (Legacy) oo dooro GIF iyo ugu dambeyntii, dhagsii badhanka Badbaadinta si aad u dhammayso nidaamka.
Haddii ay dhacdo inaadan weli si cad u caddaynin fursadaha aad haysato, waxaanu kuu dhaafnay qayb u dambaysa oo aad ku qancin karto baahiyahaas iyo shakiyada aad ka qabtid arrintan.
Halkan waxaan ku tusinaynaa barnaamijyada ugu fiican ee lagu gooyo GIF-yada.
Kapwing waa mid ka mid ah kuwa ugu fudud ee loo isticmaalo tifaftirayaasha GIF online, kaas oo waxay bixisaa adeeg tafatir bilaash ah fiidiyowyada, tafatirka sawirka, jiilka memes, iwm. Waxaad ku goosan kartaa gif ka Kapwing dhib la'aan.
Gifgifs waxay ku siinaysaa animations gif bilaash ah oo wata qaabab badan, waxayna sidoo kale caan ku tahay awoodda ay u leedahay inay wax ka beddesho GIF-yada iyo sawirrada. Haddii aad rabto in aad GIF online ka jarto, ha moogaanin
Iloveimg ayaa si fiican loogu yaqaanaa awoodaha tafatirka sawirka wejiyo badan leh, iyo tayada sawirku isma beddeli doonto tafatirka ka dib. Markaa looma baahna in laga werwero tayada GIF ka dib goosashada.
Sida aad arki karto, goosashada GIF waa wax fudud, kaliya raac tillaabooyinka aan soo sheegnay oo isku day xulashooyinka kala duwan. Intaa waxa dheer, haddii aad sii waddo baadhista iyo baadhista, waxaad ogaan doontaa kumanaanka qalab ee u jira agabkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo gooyo GIF